Yohimbe kuhukura mushoma
St John kuti sana mushoma
Organic Namo upfu
Lyophilized youmambo mondo upfu
[Latin Name] Huperzia serratum [Source] Huperziceae yose miriwo kubva China [Chitarisiko] Brown kuti chena [chirungiso] Huperzine A [Specification] Huperzine A 1% - 5%, HPLC [Solubility] Soluble muna chloroform, methanol, panyaya iyi, zvishoma soluble mumvura [PARTICIPLE saizi] 80 Mesh [Kurasikirwa iri kuomesa] ≤5.0% [Heavy Metal] ≤10PPM [tupukanana vakasara] EC396-2005, USP 34, EP 8.0, FDA [Storage] Store kuchitonhora & yakaoma nharaunda, chengeta kure chiedza zvakananga uye nokupisa. [Pasherefu upenyu] 24 Months [Package] rakazara muna ...
Min.Order Quantity: 100 Madzimabo
Supply Mano: 10000 Madzimabo pamwedzi
[Source] Huperziceae yose miriwo kubva China
[Appearance] Brown kuti chena
[Chirungiso] Huperzine A
[Solubility] Soluble muna chloroform, methanol, panyaya iyi, zvishoma soluble mumvura
[PARTICIPLE saizi] 80 Mesh
[Loss iri kuomesa] ≤5.0%
[Tupukanana vakasara] EC396-2005, USP 34, EP 8.0, FDA
[Storage] Store kuchitonhora & yakaoma nharaunda, chengeta kubva zvakananga chiedza nokudziya.
[Pasherefu upenyu] 24 Months
[Package] dzaizara pepa-ngoma maviri mupurasitiki-mumasaga mukati.
[Chii Huperzine A]
Huperzia mufananidzo chikwindi hunokura muna China. Hazvina kufanana kukirabhu mosses (mhuri Lycopodiaceae) uye anozivikanwa vamwe botanists sezvo Lycopodium serratum. Wose akagadzirira chikwindi raishandiswa dzinozivikanwa. Modern mishonga gadziriro kungoshandisa yoga alkaloid inozivikanwa huperzine A. Huperzine A ane alkaloid inowanikwa huperzia kuti kwave vakaudza kudzivisa kuparara acetylcholine, imwe pfuma inokosha vaifanira tsinga wokushandura mashoko muchitokisi nechitokisi. tsvakurudzo Animal akaita pfungwa kuti huperzine A kukwanisa kuchengetedza acetylcholine kungava kupfuura kuti vamwe chinoramba zvinodhaka. Kurasikirwa acetylcholine basa iri chikuru kuchiitwa anoverengeka kusagadzikana pfungwa basa, kusanganisira cheAlzheimer. Huperzine A anogona vanewo rwokudzivirira zvazvinoita uropi, zvimwe nokuwedzera ayo yokungotaura kukwanisa kubatsira kuderedza zviratidzo zvimwe uropi zvirwere.
[Rinoshanda] Zvinoshandiswa kungaitwa pane kwakajairika, huperzine A wawanikwa kuita somunhu cholinesterase inhibitor, rudzi mushonga kushandiswa kudzivisa kuparara acetylcholine (makemikari zvinokosha pakudzidza uye ndangariro).
Kwete chete kushandiswa kurapa nokuda cheAlzheimer, huperzine A Anonziwo kuwedzera kudzidza uye kuyeuka uye kudzivirira zera-chokuita zvishande kuderera.
Uyezve, huperzine A pacho rinoshandiswa vaonekere simba, kuwedzera kurinda, uye kunobatsira pakurapa myasthenia gravis (imwe autoimmune nyonganyonga inokanganisa tsandanyama).
Previous: Green tii mushoma
Next: Kava wabvisa
Garlic wabvisa Powder
Rhodiola rosea wabvisa
Tribulus terrestris mushoma
Acai mukapabheri mushoma
Anozvininipisa Nyuchi chimwe kukosha zvipenyu zvakasikwa. Nyuchi zvinokosha kuti kugadzirwa kwezvokudya kuti isu ...
© Copyright - 2016-2017: All Rights Reserved. - Power ne Globalso.com